The Anthem of the Heart ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
The Anthem of the Heart ( 2018 )
2015 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Anthem of the Heart လို့ အမည်ရတဲ့ Anime လေးကို Live Action အဖြစ် ပြန်လည် အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ …
Anime တုန်းကလည်း အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Live Action မှာရော ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …
ဂျန် လို့ အမည်ရတဲ့ ကောင်မလေးက စကားအရမ်းများတဲ့ သူတစ်ဦးပါ … စကားကပြောတိုင်းလဲ မကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ကောင်မလေးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင် သူ့မိဘတွေကွာရှင်းခဲ့ရတဲ့အထိတောင် ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ် …
သူ့အဖေကတော့ပြောသွားရှာတယ် ” စကားကျွံသွားရင် ပြန်နှုတ်လို့ မရဘူး ” ဆိုပြီး …
မိဘတွေကွာရှင်းခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲ ကောင်မလေး စကားမပြောနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ….
ဘာကြောင့်မပြောနိုင်ရတာလဲဆိုရင် ဥနတ်ဘုရားက ဆိုးတဲ့စကားလုံးတွေပြောတဲ့သူကို အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့စကားမပြောနိုင်အောင် လုပ်လိုက်တာလို့ ကောင်မလေးကထင်ခဲ့တယ် …
ကောင်မလေးကကျိန်စာတိုက်ခံရသလို ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ … အဲလိုနဲ့အရွယ်တွေရောက်လာတော့ ကျောင်းမှာသူကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတောင် ချစ်တယ် လို့ မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး … အဲ့ကောင်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ ” တခု ” လို့ခေါ်တယ် …
တခု ကလဲ ကောင်မလေးကို သတိထားမိခဲ့တယ် … နောက်တော့ကောင်မလေးရဲ့ အကြောင်းစုံကို သိသွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ ….
အဲ့ဒီနောက်မှာ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ကြည့်လိုက်တော့နော် …
Rating အရ IMDb မှာ 5.8/10 နှင့် MyDramaList မှာ 8.1/10 အသီးသီး ရရှိထားပါတယ် …
Translator : Kiddo
Encoder : Ziven
Quality : 720p Blu-ray
Director: Naoto Kumazawa
Actors: Anna Ishii, Jun Nishiyama, Kanichiro, Kento Nakajima, Kyoko Yoshine, Nene Otsuka, YosiYosi Arakawa
Quality: Blu-ray 720p
Openload.co Myanmar600 MB Download Soliddrive.co Myanmar600 MB Download
? You May Also Like!
Never Said Goodbye ( 2017 )
အရင်ကလည်းတင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် Link တွေ ပြန်ပြင်ပေးထားတာပါ … Melodrama , Romance ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး တရုတ် နဲ့ ကိုရီးယား ဖက်ဆက်ရိုက်ကူးထားခြင်းမျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ် … Main Cast အနေနဲ့ကတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာ မလိုပါဘူး သိကြမှာပါ … Moon Lovers ထဲက ခေါင်းဆောင်မင်းသား ပျိုတိုင်းချစ်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကြီး Lee-Joon…
The Guns of Navarone ( 1961 )
ဒီတစ်​ခါ MMATV က တင်​ဆက်​​ပေးမှာက​တော့ Guns of Navarone ဆိုတဲ့ ကား​ဟောင်း​တစ်ကား​ပါ​ … 1961 က ရိုက်​ကူးခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်​ကားဟာ ​Gloden Globe Award ​ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု​တွေ၊ Nominations ​တွေ ရရှိခဲ့ပြီး IMDB 7.6/10 , Rotten Tomatoes 95% အထိရရှိခဲ့တဲ့ ကား​ကောင်းတစ်​ကားပါ ……
Country: United kingdom,United States
Ali and Nino ( 2016 )
Ali & Nino (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ************************************************ Ali & Nino ဆိုတဲ့ novel လေးကိုပြန်ရိုက်ထားတာပါမင်းသား Ali က မူစလင် မင်းသမီးက Nino က ခရစ်ယာန် ဘာသာမတူတဲ့ လူနှစ်ယောက်ချစ်မိကြတော့……. ဒါပေမယ့်Nino အဖေက သဘောမတူပါဘူး ?? Aliတို့ကလူကုန်ထံအသိုင်းအဝိုင်းဆိုတော့သဘောမတူဘူးလို့မပြောပေမယ့်စစ်ပွဲပြီးမှသာစီစဉ်ရအောင်လို့ပြောပါတယ် အဲ့တော့မင်းသမီးအဖေကိုကူညီနားချဖို့Aliကသူငယ်ချင်းအကူညီတောင်းပေမယ့်လည်း…… သူငယ်ချင်းက သစ္စာဖောက်ပြီး မင်းသမီးကိုခိုးပြေးတော့…
Aruvi ( 2016 )
Friday မှာကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ MMATVပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်”Aruvi”ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် သာမာန် Romance,Comedy တွေလိုမဟုတ်ပဲ မတော်တဆAIDSရောဂါကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ ”အာရူဗီ” ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပါ Ratingမှာလည်း IMDb9.6/10ထိအမြင့်ဆုံးရရှိထားပြီး -အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု -အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -အကောင်ဆုံးအယ်ဒီတာဆု -အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဆု ဆု ၄ဆုကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် အဓိကဇာတ်ဆောင် အာရူဗီနေရာကနေ မင်းသမီးချော Aditi Balanကပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာAIDSဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိကြမှာပါပဲ AIDSလို့ပြောတာနဲ့ဘာကိုအရင်ဆုံးပြေးမြင်စဉ်းစားမိပါသလဲ sexကြောင့်ကူးတာလို့ပဲအရင်ဆုံးတွေးထင်မိကြမှာမလား ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားမိကြသလား…
The Snow White Murder Case ( 2014 )
2014 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Japan Movie လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … စနှိုးဝှိုက်လိုလှပတဲ့ ကောင်မလေး နိုရီကိုမစ်ကီ … လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်တယ် … သွက်တယ် … အရည်အချင်းရှိတယ် … မနာလိုသူတွေလဲပေါတယ် … အရည်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမလှလေးတစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ? လုပ်ငန်းမှာ တစ်ဖွဲ့တည်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ ကန်နို … အခြားအဖွဲ့ကဆိုပေမယ့်…
Haruta & Chika ( 2017 )
2017 , March4မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ Teen , Music & School Live Action ဇာတ်ကားလေးပါ …. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – Haruta လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေး နဲ့ Chika လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးက မူလတန်းအရွယ်ထဲက ခင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ …. Haruta က ရုပ်ချောတယ်…
Rip Tide ( 2017 )
ဒီတစ်ခါတော့ သြစတေးလျကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းတေကတော့ နယူးယောက်ကဆယ်ကျော်သက်မော်ဒယ်မလေး ကော်ရာဟာမီလ်တန် သူ့အမေကလည်းမော်ဒယ်အေဂျင်စီကြီးတစ်ခုကိုဦးစီးသူ ကော်ရာက သူဝါသနာပါတာကိုမေ့ထားပြီး သူ့အမေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတိုင်း သူ့အမေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်တယ် ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာကော်ရာလှေကားကနေချော်လဲကျတဲ့ ဗီဒီယိုက အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့သွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့် မီဒီယာတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကနေ ခဏရှောင်နေဖို့ သူ့အဒေါ်ရှိတဲ့ သြစတေးလျကမ်းခြေမြို့လေးတစ်မြို့ကို ကော်ရာလာခဲ့တယ် အဲ့မြို့လေးမှာ သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်ပြီး သူယုံကြည်ရာသူဝါသနာပါတာကို လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ပြီးတော့သူ့ကိုဂရုစိုက်ကြင်နာပေးတဲ့သူကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် နောက်ပိုင်းမှာကော်ရာနောက်ပိုင်းသူ့အလုပ်ရှိတဲ့ နယူးယောက်ကိုပဲပြန်သွားမလား…
The Island ( 2018 )
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese Adventure Comedy Film လေးပါ … တရုတ်မင်းသားကြီး Huang Bo ရဲ့ Director ဘက်မှာ Debut စစလုပ်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ညွှန်းကိုပဲ ခြောက်ယောက်ထက် မနည်းတဲ့ စာရေးဆရာတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရေးသားခဲ့တာပါတဲ့ … ဝါရင့်မင်းသားကြီးတွေဖြစ်ကြတော့ Haung Bo,…
A Tale of Two Sisters ( 2003 )
အိမ်အတွင်း၏ အမှောင်ဘက်တွင် ချောက်ခြားဖွယ်ရာတွေ ရှိနေလိမ့်မည်ဟု ဆုမီတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက် သိရှိမည်မထင်ပါ။ခါတိုင်းမိသားစုတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သော အိမ်ကြီးမှာ ယခုအခါမှာတော့ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်လျက် ရှိနေလေသည်။ ယခုမနက်ခင်းသည် ခါတိုင်းနေ့တွေလို နှင်းတွေနဲ့ ရီဝေမှု န်မှိုင်းနေတာမျိုးမရှိပါ။နေရောင်ခြည်နုနုကလေးတွေသည် အိမ်ကြီး၏ ရှေ့ဘက်လမ်းကလေးပေါ်ကို ဖြာကျလျက် ရှိနေလေသည်။လမ်းကလေးပေါ်ကို ကားလေးတစ်စီးမှာ တရွေ့ရွေ့ဖြင့် မောင်းနှင်လာကာ အိမ်ရှေ့ဆင်ဝင်အောက်မှာ စက်သတ်လိုက်သည်။ ကားပေါ်ကနေ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး…
Hyouka: Forbidden Secrets ( 2017 )
Anime ကို Live Action အဖြစ်ပြန်အသက်သွင်းထားတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ … ပျိုမေတို့အသည်းစွဲ Kanto လေးလဲပါတယ် … ကိုယ်ကတော့ Kento ကို Orange Live Action မှာထဲက အသဲစွဲခဲ့သူပါ … ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးပြောပြမယ်နော် … အတိုချုပ်လေးပဲပြောမယ် … Kento လေးကတော်ဒီကားထဲမှာဖြင့် ဟိုအုတရိုအိုရဲခိ-ခွန် နာမည်နဲ့ပဲ … သူ့မှာဆောင်ပုဒ်တခုရှိတယ် ……
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်က တပ်မက်မှုတွေဟာ အဆုံးအစမဲ့စွာ ကြီးမားပါတယ်။ ကျောင်းတော်ကြီးရယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေရယ်၊ မိမိပါဝင်နေတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ စတာတွေက မိဘတွေပြီးရင် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သံယောဇဉ်တွေပါ။ ဒီအရာတွေအားလုံး ရုတ်တရက်ဆိုသလို မိမိကို သေကွဲ ခွဲသွားကြတယ်ဆိုရင်……… ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အသက်ရှင် နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာကို ဒီကားလေးထဲမှာ မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ ကယ်ဗင်ဟာ ထူးချွန်တဲ့ တာတိုအပြေးသမားတစ်ယောက်ပါ။ သူချစ်တဲ့ ကျောင်းအပြေးအသင်းနဲ့…
Our Shining Days ( 2017 )
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တရုတ်ရိုးရာဂီတ နဲ့ နိုင်ငံခြားဂန္တဝင်ဂီတရယ် ကြားက အပြိုင်အဆိုင်တွေကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဂီတ၂ဖွဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တီးခတ်ကြတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ onlineမှာအရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တာမို့ ပရိသတ်ကြီးလည်းမစိမ်းလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ တရုတ်ဂီတက ယန်းကျွင်ဆိုတဲ့ တရုတ်တူရိယာကိုတီးခတ်တဲ့ ချန်ကျင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသူဟာ ကမ္ဘာရန်သူ ဂန္တဝင်ဂီတက စန္ဒရားတီးတဲ့ ဝမ်းဝမ်ဆိုတဲ့အရမ်းချောတဲ့ကျောင်းသားကို proposeလုပ်ရာကနေ ဒီလိုထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲကြီး စလာတာပါပဲ ။ ယန်းကျွင်ဆိုတာဘာလဲလို့…
Trailer: The Anthem of the Heart ( 2018 )